रातिदेखि विशाल सपिङ मल र अस्पतालमा लागेको भीषण आगलागी अझै नियन्त्रणमा आएन – Wow Sansar
एउटा गंगटाको मूल्य ५० लाख पर्छ !
राजावादीको समर्थनमा प्रदर्शन हुन थालेपछि प्रशासनले चाल्यो यस्तो कदम
मुख्य पृष्ठ /News/रातिदेखि विशाल सपिङ मल र अस्पतालमा लागेको भीषण आगलागी अझै नियन्त्रणमा आएन
रातिदेखि विशाल सपिङ मल र अस्पतालमा लागेको भीषण आगलागी अझै नियन्त्रणमा आएन
काठमाडौं । भारतको मुख्य शहरमा भयानक आगलागी भएको छ । गएराती मुम्बईको नागपाडा क्षेत्रको एउटा मलमा आगलागी भएको हो । त्यहाँ आगो नियन्त्रणको काम अझै भइरहेको छ । यो एक स्तर–५ आगो घोषणा गरीएको छ । यस बीचमा दुई दमकलकर्मी घाइते भएको जनाइएको छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यो मलमा मोबाइल फोन र इलेक्ट्रोनिक सामानको पसलहरू रहेका थिए । बिहीबार राति ९ बजेतिर लागेको आगो राति १२ः०० बजे नियन्त्रणमा ल्याईएको थियो । तर त्यसको लगत्तै पुनः सुरु भयो । विशाल आगो देखेर, नजिकैको आवासीय टावर खाली गरियो र दमकलकर्मीलाई कल गरियो । तपाँईलाई जानकारी गराउँ कि सोमबार, मुम्बईको एउटा निजी अस्पतालमा आगो लागेको थियो ।
त्यसपछि अस्पताल अधिकारीहरूले ४० बिरामीलाई नजिकका अस्पतालहरूमा सार्नुपरेको थियो । अस्पतालमा सारिएका एक बिरामीको मृत्यु भएको जानकारी दिइएको छ । अधिकारीहरूले भने कि बेलुका ६ः३० बजेको बीच मुलुण्ड (वेस्ट) को एपेक्स अस्पतालमा लागेको आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
अत्यधिक तापक्रमका कारण अस्पतालको जेनरेटरमा आगलागी भयो । दमकलकर्मीहरुले ४० बिरामीलाई नजिकैको पाँच अस्पतालमा लगेका छन् । उनले भने कि साँझ ६ः३० बजे तिर आगो नियन्त्रण गरिएको थियो ।
अधिकारीहरुले भने कि अस्पतालमा विद्युतीय समस्या थियो, त्यसैले बिरामीहरूलाई नजिकको अस्पतालमा रेफर गरियो । बिहान १० बजे शहरमा व्यापक बिजुली समस्या खडा हुँदा शहरका अस्पतालहरूले धेरै घण्टा जेनेरेटरहरूको सहारा लिनुपरेको थियो ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
ट्वाइलेटको पानी र खुट्टाले पिठो मुछेर बनाएको देखेपछि तोडियो हजारौ पुग्ने पानीपूरी पसल
कोरोना जोखिम नभएका क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न दिने सरकारको निर्णय
सबैभन्दा महङ्गो वकिलले रिहाको पक्षमा वकालत गर्ने
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढिरहेको बेला न्यूनिकरणमा सरकारको तयारी के छ ?
आजको विनिमयदर हेर्नुहोस, कुन देशको कति? (तालिकासहित)